सेयर बजारमा बारम्बार दोहोरिने गल्तीहरु के–के हुन् ? युवा लगानीकर्ता अझै बढी सजग हुनुपर्छ
नयाँ कुरा सिक्न खोज्दा गल्ती हुनु स्वाभाविक नै हो । तर पैसासँग सम्बन्धित विषय हुने भएकाले सिकाईमा बारम्बार गल्ती गर्यो भने परिणाम निकै हानिकारक हुन सक्छ । युवा अवस्थाबाटै लगानी सुरु गर्दा जोखिम भए पनि भविष्यमा सुधार गर्ने पर्याप्त समय हुन्छ ।
सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि बारम्बार गल्ती गरिरहेका हुन्छन् । भर्खर बजारमा प्रवेश गर्ने युवा लगानीकर्ताले अझै बढी गल्ती गर्ने सम्भावना हुन्छ । किन भने व्यावहारिक ज्ञान कम हुन सक्छ । यसैक्रममा यहाँ हामी युवा लगानीकर्ताहरुले गर्ने त्यस्तै ५ साधारण गल्तीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौं ।
१. विलम्ब वा स्थगित गर्ने बानी
सेयर बजारमा विलम्ब गर्ने बानी निकै हानिकारक हुने गर्दछ । लगानी सम्बन्धी निर्णय लिन ढिलाई गर्ने, स्थगित गर्ने वा अन्तिम समयमा मात्र टुंगो लगाउने बानीले ठूलै हानिकारक हुने गर्दछ । दीर्घकालमा सेयर बजारले राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, वर्षौसम्म बजार ओरालो लाग्ने पनि हुनसक्छ । े
२. लगानी गर्नुको सट्टा अनुमान मात्र लगाउने
३. लेभरेजको ज्यादा प्रयोग
सामान्य अर्थमा भन्दा लेभरेज भनेको यस्तो लगानी रणनीति हो जसमा लगानीको सम्भावित प्रतिफल बढाउनका लागि उधारो वा सापटी रकम अथवा पुँजीको प्रयोग गरिन्छ । लेभरेजको फाइदा पनि छ र खतरा पनि । लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियोमा लेभरेज प्रयोग गर्ने उचित समय भनेको युवा अवस्था नै हो । यसअघि भने जस्तै, युवा लगानीकर्तालाई नोक्सान भर्पाई गर्नका लागि समय पर्याप्त हुने गर्दछ । तर, लेभरेजले राम्रो पोर्टफोलियोलाई समेत बर्बाद गर्ने सम्भावना भने उत्तिकै रहन्छ ।
त्यसैले, अत्याधिक लेभरेजको प्रयोग गर्नु पनि हानिकारक हुनसक्छ । आफ्नो समग्र पोर्टफोलियोको थोरै हिस्सामा मात्र लेभरेज राख्दा जोखिम कम हुनुका साथै प्रतिफल पनि पाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै एक युवा लगानीकर्ताको पोर्टफोलियोमा १ लाख रुपैयाँ छ भने उसले आफ्नो पोर्टफोलियोको १०५ हिस्सामा २ः१ अनुपातमा लेभरेज राख्नु उचित हुन्छ । यसले केही मात्रामा जोखिम त बढाउला, तर समग्र पोर्टफोलियोलाई भने धेरै असर गर्दैन ।
४. पर्याप्त प्रश्न नगर्ने
प्रश्न नगर्नु युवा लगानीकर्ताले गर्ने अर्को प्रमुख गल्ती हो । यदि कुनै सेयरको भाउ धेरै घट्यो भने बाउन्स ब्याक हुने अपेक्षा पनि युवा लागानीकर्तामा होला । तर भाउ बाउन्स ब्याक हुन पनि सक्छ र नहुन पनि त सक्छ । यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । सेयर भाउ जुनसुकै बेला पनि तलमाथि हुन सक्छ । तर यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुनुपर्ने मुख्य प्रश्न, ‘किन’ ? लाई भने अधिकांश युवा लगानीकर्ताले कमै मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
आफैं सिकेर लगानी गर्न पर्याप्त समय नभएका युवा लगानीकर्ताले वित्तीय सल्लाह दिन सक्ने व्यक्ति वा कम्पनीको सहयोग लिएर लगानी गर्न सक्दछन् । यस्तै, उचित अनुसन्धान गर्न नचाहने युवा लगानीकर्ताले कम जोखिम भएका कम्पनी तथा फन्डहरुमा लगानी गरी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सक्दछन् । जो युवा लगानीकर्तासँग सिक्ने इच्छा र क्षमता दुवै छ, उनीहरुले आफैं प्रश्न र अनुसन्धान गरी आफैं लगानी गर्न सक्दछन् ।
५. लगानी नगर्नु